Kabsado My Files Free
> Resource > Free > Ladnaansho My Files Free ceshan Files My u Mac
Waa arrin baahida adag inuu ka soo kabsado files kuwa dhici in xogta laga badiyay ka computer, drive adag, camera, iwm Haddii aad ka raadin "kabsado files aan" la Google, aad arki doonaa qalab kabashada xogta magacaabay "Ladnaansho My Files" .
Kabsado My Files waa barnaamij soo kabashada xogta caanka ah ee internet-ka, waana wax runtii aad u awood badan oo lagu kalsoonaan karo. Waxa aad bixisaa interface fudud oo la mid ka mid ah matoorada software kabashada file ugu awooda badan. Laakiin, waa barnaamij bixisay iyo in kaliya ay ku haboon PC Windows. Shuruudaha Windows kabashada xogta lacag la'aan ah iyo soo kabashada xogta Mac igama aydnaan eryin inaan maqaalkaan qoro.
Qeybta 1: Ladnaansho My Files Free Alternative (Windows)
Qeybta 2: Ladnaansho My Files Mac: Wondershare Data Recovery for Mac
Haddii aad rabto in aad hesho qaar ka mid ah soo kabashada xogta lacag la'aan ah oo ah sida waxtar leh sida "Ladnaansho My Files", waxaan u soo jeedin doonaa qalabka sida raaco in aad:
Top 3: SoftPerfect Recovery File
ADRC Data Recovery Tools (132KB) dhab ahaantii waa barnaamij soo kabashada xogta ah halkii yar yar oo la qaadi karo oo lacag la'aan ah oo aad ka caawisaa in ay files undeleted ka qalabka sida adag drive, USB drive, kaadhka xusuusta iyo in ka badan.
1 Waxaa si aad u yar yar oo la qaadi karo in aadan xataa u leeyihiin in ay u soo dajiyo. Waa barnaamij download in la isticmaalo;
2 In kastoo qalab uusan bixin Falanqeynta file, dhammaan faylasha helo waa la qoran karaa kordhin, dhismayaasha file iyo magacyada asalka ah;
3 Marka laga reebo ka soo kabashada xogta lacag la'aan ah, waxaad heli doontaa muuqaalada dheeri ah sida ceeriin Copy, kaabta Image / Celinta iyo Boot dhise ka qalab this.
1 ma noqon doonaa inaad awoodo inaad ku eegaan wax ka mid ah laga helay files;
2 ma Waad joojin kartaa iskaanka ka hor inta uu baaritaanku drive oo dhan, taas macnaheedu waa waxa ay qaadataa waqti dheer ka hor inta aadan soo kaban karto, files lumay;
Top 3: Recovery File SoftPerfect
SoftPerfect waa barnaamij undelete kale download in la isticmaalo file free la socod fudud. Sida ADRC Data Recovery Tools, waa ay awoodaan in ay undelete files ka kaydinta warbaahinta caadiga ah oo aad u. In kastoo ay tahay yar, waxa ay taageertaa soo kabashada xogta laga ugu nidaamka file Windows sida sida FAT12, FAT16, FAT32, NTFS iyo NTFS5 la riixo iyo sirta.
1 Ma aha inaad si loo soo dajiyo barnaamijka;
2 iskaanka waa mid dhakhso badan, oo aad u astaysto noocyada file aad rabto in aad u soo kabsadaa filter barnaamijka;
3 Waad joojin kartaa iskaanka mar kasta oo aad rabto;
4 Files waxaa sida caadiga ah soo bandhigay magacyada asalka ah.
1 No Falanqeynta file;
2 Dhammaan files helay ku qoran yihiin hal suuqa kala, waxaad u baahan tahay in ay qaataan qaar ka mid ah waqtiga si aad u hesho files lumay.
Sida barnaamijyada soo kabashada file free kale ee liiska, Free Undelete ayaa interface nadiif ah oo aad u. Waa in la soo celiyo files ka drives adag, kaararka xusuusta, iyo qalab kale oo la mid ah kaydinta awoodaan. Maxaa u gaar ah waa "folder dhuuxaan" shaqeynayaan. Function Arintan waxay u sahlaysaa in aad hubiso helay files in qaab-dhismeedka galka.
1 Dhammaan files helay ku qoran yihiin sida ay qaab-dhismeedka folder, taasoo u fududaynaysa in aad ka heli faylasha sida dhismayaasha asalka ah;
2 Waxaad la gelin noocyada file aad doonayso in "Filter helay" kartaa qalab uu furmo suuqa;
3 Xaaladda file heleen in si cad loo soo bandhigi doonaa.
1 ma Waxaad ku eegaan karo sawirada ama faylasha kale;
2 Hadii aad isticmaalayso Windows 8 computer ah, barnaamijkan laga yaabo in aysan waxtar leh.
Glary Undelete waa barnaamijka ugu dhamaystiran free undelete oo liiska ku jirta. Awoodda Falanqeynta barnaamijka u saamaxaaya in ay hubiyo sida badan oo files badiyay aad soo kaban karto. Barnaamijka Tani waxay bixisaa aad "fayl" sahlan aragtida, "File Type" aragtida, iyo "State" ee file kasta, soo jeedinaya sida ay u badan tahay faylka la soo kabsaday karo.
1 Waxaad ku eegaan karo helay files;
2 Barnaamijku wuxuu ku qor doonaa files ee "fayl" iyo "Noocyada File" dhismeedka;
3 Dawladda helay files si cad u sheegay doonaa in uu furmo.
1 iskaanka soconaysaa wax yar dheer.
Sida arrin xaqiiqada, ku dhowaad dhammaan barnaamijyada soo kabashada xogta Mac ee internet-ka u baahan in lagu bixiyo soo kabashada. Waxaan si dhib ka heli kartaa "Free Ladnaansho My Files Mac" utility u isticmaala Mac. Waxaa tahay qalab kabashada xog badan oo ay bixisay Mac ee internet-ka, iyo mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inay dhib kugu ah in aad doorato mid ka mid ah ugu kalsoonaan karo oo waxtar leh oo aad u. Ha welwelin, waxaan fursad u haysataa in aad si fiican u ah: Wondershare Data Recovery for Mac
Created by Wondershare si fiican u yaqaan, Wondershare Data Recovery for Mac waa mid ka mid ah barnaamijyada ay keentay in caawiyo dadka isticmaala Mac dib u soo ceshano lumay, la tirtiro ama formatted files warbaahinta kaydinta kala duwan. Waajibka ah Wondershare Data Recovery for Mac kama dambaysta ah waa in ay degdeg ah, ammaan ah oo lagu kalsoonaan karo Mac samatabbixiyaha xogta. Waxaa soo kabanayo xogta xoomey u badan oo dadka isticmaala Mac, waxaana uu ahaa mid aad loo amaanay iyaga by.
Iyadoo Wondershare Data Recovery for Mac, waxaad heli doontaa:
1 Marka la barbar dhigo barnaamij kale soo kabashada xogta Mac, Wondershare Data Recovery for Mac bixiya fursado aad u soo kabashada badan:
Lumay Recovery File - Celinta file tirtiray la magac file asalka ah iyo geed-dhismeedka.
Recovery ceeriin ah - Deep uu baaritaanku aad drive si aad u hesho xogta laga badiyay
Recovery Barzakh - Ladnaansho xijaab lumay ama la tirtiro.
iPhone Recovery ka Lugood - Ladnaansho files lumay sida sawiro, videos, xiriirada, SMS, qoraalo ka Lugood gurmad file aad iPhone, iPad iyo iPod Touch.
2 awood leh soo kabashada xogta Mac: Wondershare Data Recovery for Mac kabanayso xogta ma aha oo kaliya ka qalabka Mac, laakiin sidoo kale warbaahinta kaydinta sida drive dibadda adag, USB drive, iPod, camera digital, kaarka flash, iwm
3 debecsan & Cayiman Recovery File: Waxaad ku xasil karo iskaanka mar kasta oo aad hesho files doonayo.
4 kulanka xiisaha leh boosaska badan: Waxaad ku eegaan karo sawirada, waraaqaha, emails iyo archives, iyo sidoo kale videos watch iyo maqli files audio ka hor soo kabashada si loo xaqiijiyo faylasha aad rabto in la soo celiyo.
5 Waxaad ka eegi kartaa files ansax ah oo aan waxba ka jirin ka hor soo kabashada leh "ansax File" furmo.
6 Waxaad xitaa badbaadin karo iyo dajiyaan natiijada hore iskaanka in dib loo bilaabo dib u soo kabashada aan rescanning qalab aad.
Dhammaan muuqaalada ku xusan gaar ah oo awood badan sameeyo doorasho Wondershare Data Recovery for Mac soo jiidasho u leh soo kabashada xogta Mac, ama xitaa soo kabashada xogta iPhone. Waxaad ku arki doonaa sida baado ah nolosha marka retrieves aad files lumay si degdeg ah oo ammaan ah. Waa maxay sababta aan aad hadda isku dayi u ha?
Baro wax badan oo ku saabsan Wondershare Data Recovery for Mac